पाल्पा, १५ मंसिर – सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्रयाउने गरी संसदमा दर्ता गराएको संशोधन विद्येयक विरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेकका दलहरुले तानसेनमा दिउँसो प्रदर्शन गरेका छन् ।
तानसेन टुँडिखेलबाट जुलुस निकालेर बजार परिक्रमा गर्दै प्रदर्शनकारीले बसपार्कमा पुगेर कोण सभा गरेका छन् । तानसेनको भिमसेनटोल, नारायणस्थान, असनटोल, सित्तलपाटी, टक्सार, मखनटोल, सिल्खान, लहरेपिपल हुँदै ५ नम्बर प्रदेश टुक्रयाउन पाईदैन भन्दै विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन् । विरोध जुलुस प्रदर्शन सुरु भएपनि तानसेन बजार स्वःस्फूर्त बन्द भएका थिए । कतिपयलाई बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनसमेत दलहरुले आग्रह गरेका थिए ।
कोणसभामा बोल्दै सत्तारुढ कांग्रेसका जिल्ला सभापति बीरबहादुर रानाले हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बसेका नेपालीलाई कुन शक्तिले फुटाउन खोजेको हो त्यसलाई नाङ्गेझार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष नारायण आचार्यले सहरमा मात्र होइन, गाउ“गाउ“मा यसको विरोधको कार्यक्रम हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष विशाल दर्लामीले जनताको चाहनाविपरित केन्द्रबाट जुन खेल खेलिएको छ त्यसलाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद श्रेष्ठले निजी क्षेत्र तराई र पहाड अलग्याउन नहुने राय दिने बताउदै आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन हुने बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र बाहेकका दल, उद्योग वाणिज्य संघको सहभागितामा संयुक्त बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ । संयुक्त बैठकले संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता विरुद्ध आन्दोलन अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको मस्यौदामा प्रदेश नम्बर ५ लाई विभाजन गरी पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखा“ची, प्युठान, रोल्पा र रुकुमलाई प्रदेश नं ४ मा राख्न प्रस्ताव गरेको सीमाकंन हेरफेरप्रति सबै दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका हुन् ।
सिमाकंन हेरफेरको प्रस्ताव हिमाल, पहाड र तराईलाई अलग गराउने सुनियोजित योजना वमोजिम भएको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको दलहरुले बताएका छन् । दलहरुले सम्पूर्ण पाल्पाली जनसमुदायलाई आन्दोलनका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी हुन आव्हानसमेत गरेका छन् । दलहरुले तानसेन बजार बन्द, विरोध प्रदर्शन, बृहत भेला तथा अन्तरक्रिया, प्रदेशस्तरीय सभा, पाल्पा बन्द घोषणा गरेका छन् । भोलि तानसेन नगरपालिका ठूलो हलमा बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ । शुक्रबार प्रदेशस्तरीय बृहत सभा बुटवलमा हुने र त्यही सहभागी हुने निर्णय गरेका छन् । मंसिर १८ शनिबार पाल्पा बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । कांग्रेस सभापति राना, एमाले अध्यक्ष आचार्य, राप्रपा अध्यक्ष डुलबहादुर कुंवर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष दर्लामी, नेकपा मालेका अध्यक्ष धनराज पौडेल, अखण्ड नेपालका धु्रव नेपाल, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहनप्रसाद श्रेष्ठले आन्दोलनको कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
पाल्पा, १३ मंसिर – विनु पुलामी मगरको हत्या अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले ३ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ ।
ताहूँ ७ फुरुङ्गदीका दिपेन्द्र बस्याल, बस्यालका बाबु लक्ष्मण बस्याल, आमा पार्वती बस्याललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो । प्रहरी उपरीक्षक हरिराज वाग्लेले घटनाको उजुरीपछि आफूहरु निरन्तर अनुसन्धानमा रहेको र किटानी जाहेरीको आधारमा तीनै जनालाई पक्राउ गरी आव्रश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको बताउनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले पत्रकार सम्मेलन गरी तीनै जना प्रहरी हिरासतमा रहेको जानकारी गराएको छ ।
प्रहरीले दिपेन्द्र बस्याललाई काठमाडौँको सिनामंगलबाट मंसिर १२ गते, बाबु लक्ष्मण बस्याललाई दोभानको सिद्धबाबा र आमा पार्वती बस्याललाई तानसेन ३ बाट मंसिर ११ गते पक्राउ गरेको हो । जिल्ला अदालत पाल्पाले आइतबारदेखि बाबुआमाको ६ दिन र सोमबारदेखि छोराको ५ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको छ । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सुवर्ण खनालले तीनै जनालाई १७ गतेसम्मको म्याद थप गरी अनुन्धान गर्न अनुमति दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
२०६९ साल भदौमा दिपेन्द्र बस्यालसँग प्रेम विवाह गरी घरजम गरी बसेकी पुलामीको गत कार्तिक ४ गते हुँगीको असेर्दी कालीगण्डकी तटमा शव फेला परेको थियो । सनाखत नभएपछि प्रहरीले बेवारिसे शव तानसेन नगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको र कार्तिक ८ गते राम्दी बगरमा गाडिएको थियो । माइती पक्षले आफ्नी छोरी सम्पर्कमा नआएको भन्दै मंसिर ८ गते मंगलबार प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । विनु हराएको भन्ने प्रहरीमा लिखित निवेदन दिएपछि दिपेन्द्र बस्याल फरार भएका हुन् । पुलामी परिवारले दिपेन्द्रसहित बाबुआमा लक्ष्मण र पार्वतीलाई किटानी जाहेरी दिएका हुन् ।
विनु पुलामीको हत्यारालाई कारवाही र किशोर न्यौपानेको अपहरणकारीलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पाल्पाका विद्यार्थी संगठनहरुले आज तानसेनमा प्रदर्शन गरेका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितिले टुँडिखेलबाट जुलुस निकालेको जुलुस आन्दोलनचोक, लहरेपीपल, दरबारमार्ग, शीतलपाटीमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । हत्यारालाई कारवाही गर, अपहरणकारीलाई सार्वजनिक गर भन्ने नारा र प्ले कार्डसहितको जुलुसमा तानसेनका विभिन्न क्याम्पस र विद्यालयमा अध्ययनरत हजारौँ विद्यार्थीहरुको सहभागिता देखिन्थ्यो । हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै महिलाहरुले पनि जुलुस निकालेका छन् ।
शीतलपाटीमा आयोजित सभामा नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य हरिबोल भट्टराई, अनेरास्ववियूका केन्द्रीय सदस्य दीपक विश्वकर्मा, टिका थापा, नेविसंघका जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण आले, अखिल छैटौँका जिल्ला अध्यक्ष पुरन पोखरेल, अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार पन्थी, मगर विद्यार्थी संघका राधाकृष्ण दंगाललगायतले हत्यारालाई कानुन वमोजिम तत्काल कारवाही गर्न माग गरेका थिए । विद्यार्थी नेताहरुले पछिल्ला दिनहरुमा पाल्पाको शान्ति सुरक्षा फितलो बन्दै स्थानीय प्रशासनको आलोचना गरेका छन् । अपराधीलाई कारबाहीको माग गर्दै तानसेनमा दिनहुँ जसो आन्दोलन भइरहेको छ ।
पाल्पा, मंसिर ८– ताहूँ ७ फुरुङ्दीका दिपेन्द्र बस्यालकी श्रीमति विनु पुलामी मगर दशैँपछि वेपत्ता भएको भन्दै माइती पक्षले खोजीका लागि प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ ।
विनुको बाबु नरबहादुर पुलामी ‘नरेन्द्र’ दशैँपछि छोरीसँग सम्पर्क नभएको र ज्वाईंले भेट गराउँछु भन्ने तर नगराउने गरेपछि प्रहरीमा लिखित जाहेरी दिएको बताउनुभयो । जाहेरी दिनुअघि विनुका भाइ भद्रबहादुर पुलामीले गाउँका समाजसेवीलाई राखेर भिनाजु दिपेन्द्रसँग सोधपुछ गरेका थिए । भाइ भद्रबहादुर पुलामीले भने, ‘भिनाजुले आफ्ना बाबामार्फत भोली ११ बजेसम्म सम्पर्क गराउछु भन्नुभयो तर भोलीपल्ट मोवाइल बन्द गरी आफै सम्पर्क विहिन बन्नुभयो ।’ पुलामी परिवारले मंगलवार तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गरी विनु पुलामीको खोजी गरिदिन सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले लिखित जाहेरीपछि अनुसन्धान कार्य जारी राखेको छ । प्रहरी उपरीक्षक हरिराज वाग्लेले उजुरीपछि घटनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी खोजी कार्य तिब्र बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले अन्य शंकास्पद विषयमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
दिपेन्द्र बस्यालले २०६७ सालमा विनु पुलामीसँग प्रेम विवाह गरेका हुन् । केटाका अभिभावकले अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार गर्दै घरमा भित्र्याउन इन्कार गरे तापनि केटाकेटीलाई तानसेन घरमा बस्ने प्रबन्ध मिलाएका थिए । विवाहपछि दुबै केटाकेटीको फेसबुकमा ‘ह्याप्पी मुड’ का युगल तस्वीर अपलोड हुने गरेका थिए । विनुका बाबु नरेन्द्र पुलामीले आफूहरुले मगर संस्कृति अनुसार अक्षतापाती र ढोगभेट दिइ भित्र्याएको जानकारी दिनुभयो । पुलामीले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि छोरी ज्वाईं बेलाबखत आउने जाने, दशैंका बेला घर र मेरा दाजुभाइकहाँ समेत टीका लगाउन जाने गर्नुहुन्थ्यो । दशैँपछि भने छोरीसँग सम्पर्क भएको छैन ।’
पुलामीले आफ्ना श्रीमान्लाई नागरिकता बनाउन र विवाह दर्ता गर्न पटकपटक आग्रह गरेको बुझिन्छ । श्रीमतिको आग्रहपछि बस्यालले एक जना वकिल राखेर कानुन वमोजिम विवाह भएको हो भनि विवाह दर्ताको सिफारिश पत्र बनाएका छन् । पहाडिया कागजमा केटाकेटी दुबैले औँठाछाप लगाई हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘कोर्ट म्यारिज’ भनिएको यो कागजमा कानुन अधिकृत भनि विनोद कार्कीको हस्ताक्षर छ । कानुन व्यवसायी विनोद कार्कीले त्यो कागज आफूले नगराएको र हस्ताक्षर पनि आफ्नो नभएको बताएका छन् ।
विनुका आफन्तले लामो समय बेखबर रहेकाले हत्यासम्म गरिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । गएको कात्र्तिक ४ गते हुगीँ गाउँ विकास समितिको असेर्दी कालीगण्डकीको तटमा एक युवतीको वेवारिसे लास भेटिएको थियो । प्रहरीले मुचुल्का उठाउँदा खिचेको लासको तस्वीर हेरेपछि माइती पक्षले त्यो विनुको हुनसक्ने शंका गरेका हुन् । भाइ डिवि थापाले निधारमा रहेको कालो कोठी र टिशर्ट हेर्दा लास विनुकै पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । प्रहरीले यस सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान भइरहेको लास पानीमा भिजेको हुनाले चिन्न गाह्रो भएको बताएको छ ।
स्मरण रहोस्, ताहूँ ७ फुरुङ्दीका दिपेन्द्र बस्याल जिल्ला शिक्षा कार्यालय पाल्पाका प्राविधिक हुन् भने हेक्लाङ ६ माइत भएकी २४ वर्षिय विनु पुलामी वि एस्सी अध्ययन गर्दै छन् ।
पाल्पा, कात्र्तिक २१– पाल्पाले २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाको नाम, केन्द्र, सीमाना र वडाको विभाजनसहितको प्रस्ताव स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई पठाएको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना जिल्ला प्राविधिक समितिको बैठकले जिल्लाका सांसद, राजनीतिक दल र पूर्व जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा सर्वसम्मत नगर र गाउँपालिकाको प्रस्ताव तयार पारेकोे हो । रामपुर नगरपालिकाको सीमाना यथावत रहेको छ भने तानसेन नगरपालिकामा मदनपोखरा, तेल्घा, बन्दिपोखरा, बौघापोखराथोक, बौघागुम्हा, अर्गली गाउँ विकास समिति र बराङ्दीका २,३,४,५ र ६ नम्बर वडा समावेश भएका छन् । प्रस्तावित दुबै नगरपालिकाको नाम यथावत नै रहेका छन् भने वडा संख्या घटेर रामपुरमा १० र तानसेनमा १४ वडा कायम भएका छन् ।
मगर समुदायको वाहुल्य रहेको बाकामलाङ, सहलकोट, झिरुवास, मित्याल, गल्धा, अर्चले र ज्यामिरेलाई मगरात गाउँपालिका नामाकरण गरी स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गरिएको प्राविधिक समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । प्राय साविकका गाउँ विकास समिति गाउँपालिकाको एउटा वडा कायम भएका छन् । नगरका प्राय २ वटा वडा जोडेर एउटा कायम गरिएको छ । रामपुरको वडा नं ३, १०, ११,१२, १५ र तानसेनको वडा नं. ४ पुनर्संरचनामा पनि एउटै वडा कायम रहेका छन् । मदनपोखरा र दोभानले आ–आफ्नो तहमा २ वटा वडा पाएका छन् ।
मगरात स्वायत्त गाउँपालिकाको मित्याल रुक्सेभञ्ज्याङ, रामपुर नगरपालिकाको बेझाड, पूर्वखोला गाउँपालिकाको रिङ्नेरह, रम्भा गाउँपालिकाको ताहु वा खोकखोला, माथागढी गाउँपालिकाको रुप्से वा झडेवा, तिनाउ गाउँपालिकाको दोभान, वगनासकाली गाउँपालिकाको चिलाङ्दी, तानसेन नगरपालिकाको तानसेन, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको खस्यौली, पालुङमैनादी वा कुसुमखोला, छहरा वा रैनादेवी गाउँपालिकाको छहरा केन्द्र कायम भएको छ ।
स्थानीय तह १ – मगरात स्वायत्त गाउँपालिका
बाकामलाङ, सहलकोट, झिरुवास, मित्याल, गल्धा, अर्चले र ज्यामिर १\_१ गरी ७ वटा वडा कायम भएका छन् जसको केन्द्र मित्यालको रुक्सेभञ्ज्याङ छ ।
स्थानीय तह २ – रामपुर नगरपालिका
रामपुर नगरपालिकाका साविकका वडाहरु १ र २, ३, ४ र ५, ६ र ७, ८ र ९, १०, ११, १२, १३ र १४, १५ क्रमश १\_१ वडा गरी (कुल १०) कायम भएका छन्, जसको केन्द्र बेझाड रहेको छ ।
स्थानीय तह ३ – पूर्वखोला गाउँपालिका
सिलुवा, जल्पा, रिङ्नेरह, देवीनगर, बीरकोट, हेक्लाङ क्रमश १\_१ गरी ६ वटा वडा कायम भएका छन्, जसको केन्द्र रिङ्नेरह रहेको छ ।
स्थानीय तह ४ – रम्भा गाउँपालिका
हुँगी र हेक्लाङ ९, फोक्सिङ्कोट, पीपलडाँडा, हुमिन र ताहूँ क्रमश १\_१ गरी ५ वटा वडा कायम भएका छन्, जसको केन्द्र ताहूँ वा खोकखोला रहेको छ ।
स्थानीय तह ५ – माथागढी गाउँपालिका
चिदीपानी, रुप्से, झडेवा, रहबास र बहादुरपुर १\_१, गोठादीको ५,६,८,९ र कसेनी ४ र ८, गोठादी १,२,३,४ र ७, कसेनीको १,२,३,५,७ र ७ एकएक गरी ८ वटा कायम भएका छन् । यसको केन्द्र रुप्से वा झडेवा दुई विकल्प मध्ये कुनै एक रहनेछ ।
स्थानीय तह ६ – तिनाउ गाउँपालिका
कचल, दोभान ३,६,७र९, दोभान १,२,४र५, कोलडाँडा १,२,३र४, कोलडाँडा ५,६,७,८,९,मस्याम४, मस्याम १,२,३,५,६,७,८,९,दोभान८ १\_१ गरी ६ वटा वडा कायम भएका छन् । यसको केन्द्र दोभान रहेको छ ।
स्थानीय तह ७ – वगनासकाली गाउँपालिका
चिर्तुङ्धारा, पोखराथोक, नायरनमतलेस, खानीछाप, दर्लमडाँडा, यम्घा, खानीगाउँ, बराङ्दी १,७,८,९ र चापपानी १\_१ रहने गरी ९ वटा वडा कायम भएका छन्, जसको केन्द्र चिलाङ्दी रहेको छ ।
स्थानीय तह ८ – तानसेन नगरपालिका
तानसेन१०,बराङ्दी२,६, तानसेन१,२,१५, तानसेन५,६,८, तानसेन४, तानसेन७,१२,१३बराङ्दी३,४,५, तानसेन९,३, तानसेन११,१४, मदनपोखरा२,३,४,५,९, मदनपोखरा१,६,७,८, तेल्घा, बन्दिपोखरा, बौघापोखराथोक, बौघागुम्हा र अर्गली १\_१ गरी १४ वटा वडा कायम भएका छन् । यसको केन्द्र तानसेन रहेको छ ।
स्थानीय तह ९ – रिब्दीकोट गाउँपालिका
ख्याहा, देउराली, खस्यौली, भैरवस्थान, कुसुमखोला, ठिमुरे, पालुङमैनादी र फेक १\_१ रहने गरी ८ वटा वडा कायम भएका छन्, जसको केन्द्र खस्यौली वा पालुङ्मैनादी वा कुसुमखोला रहनेछ ।
स्थानीय तह १० – छहरा वा रैनादेवी गाउँपालिका
सिद्देश्वर, सोमादी, भुवनपोखरी, छहरा, मुझुङ्, जुठापौवा, बल्ढेङ्गढी र सत्यवती १\_१ रहने गरी ८ वटा वडा कायम भएका छन्, जसको केन्द्र छहरा गाविसभित्र उपयुक्त स्थानमा रहनेछ ।
एमाले पाल्पाको अध्यक्षमा तीन आकांक्षी
पाल्पा । नेकपा एमाले पाल्पाको आठौँ अधिवेशन कार्तिक ४ र ५ गते तानसेनमा हुने भएको छ ।
त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस तानसेनको खुल्ला मैदानमा आयोजित उद्घाटन समारोहलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको जिल्ला अध्यक्ष देवी प्रसाद बस्यालले जानकारी दिनुभयो । अधिवेशनका लागि गठित विभिन्न उपसमितिहरुले आवश्यक तयारीको काम गरिरहेका छन् ।
जिल्ला अधिवेशनका लागि क्षेत्र नं १ बाट १ सय १९, क्षेत्र नं २ बाट ९२ र क्षेत्र नं ३ बाट १ सय ४४ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् । मनोनित बाहेक कुल ३ सय ५५ जना कार्यकर्ता सर्वसम्मत प्रतिनिधि चयन हुन् । एमाले पाल्पामा ५ हजार ३ सय १८ जना पार्टी संगठित सदस्य छन् । पार्टीको नयाँ नेतृत्वका लागि ३ जना आकांक्षी देखिएका छन् । वर्तमानमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका देवी प्रसाद बस्याल, पूर्व अध्यक्ष यादवबहादुर रायमाझी र पूर्व उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद आचार्यले अध्यक्ष पदमा दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।
बस्यालले सर्वसम्मत् नेतृत्व चयन हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफू सक्षम रहेको बताएका छन् । आगामी तीन तहका निर्वाचन र संगठन सुदृढीकरणका लागि सर्वसम्मतीको नेतृत्वको खाँचो रहेको उनको तर्क छ । बस्याल भन्छन्, ‘दुबै विचार समूहलाई कुशलतापूर्वक संयोजन गर्न सक्ने क्षमता नै मेरो योग्यता हो ।’ रायमाझी अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भए तापनि निरन्तर पार्टी र कार्यकर्ताको बीचमा रहेकाले यसपाली आफू अध्यक्ष हुनुपर्ने दावी गर्दछन् । रायमाझी भन्छन्, ‘म सहमतिको पक्षधर नै हुँ तर मैले पाए मात्र सहमति हुन्छ भन्ने मान्यता कसैले राख्न हुँदैन ।’ अध्यक्षका अर्का आकांक्षी आचार्यले पार्टीको कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका बखत पनि आफू पदमा रहेकाभन्दा बढी नै सक्रिय रहेको र विगतमा उपाध्यक्ष बनेर काम गरेको अनुभव रहेकाले यसपाली आफ्नो दावी जायज रहेको बताए । आचार्य भन्छन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टीमा विचार, संगठन र कार्यकर्ता प्रमुख हुन्, तिनलाई चिन्ने नेतृत्व हुनुपर्छ ।’
सर्वसम्मतिको सम्भावना अन्तिमसम्म रहन्छ यद्यपि रायमाझी र आचार्यले प्रतिस्पर्धा स्वीकार्य भएको भन्दै कार्यकर्ता भेटघाट थालेकाले निर्वाचन पनि हुन सक्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ । नेकपा एमाले जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले आगामी नेतृत्वका विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर पनि व्यापक बहस चलेको देखिन्छ ।
को हुन् आकांक्षी ?
देवी प्रसाद बस्यालसँग विद्यार्थी संगठन, युवा संघ र पार्टी राजनीतिमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । उनले पार्टीको सचिव, उपाध्यक्ष र कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । बस्याल पाल्पा क्षेत्र नं २ को कम्युनिष्ट गढ यम्घा निवासी हुन् ।
यादवबहादुर रायमाझीसँग शिक्षक संगठन र पार्टी संगठनमा काम गरेको अनुभव छ । उनले गाउँ विकास समिति अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिको उपसभापति र सांसद बनेर जनप्रतिनिधिको भूमिका पनि निर्वाह गरेका हुन् । एमाले पाल्पाको पूर्व अध्यक्ष रायमाझी पाल्पा क्षेत्र नं ३ को छहरा निवासी हुन् ।
नारायण आचार्यसँग विद्यार्थी, स्वयम्सेवक दस्ता र पार्टी संगठनमा काम गरेको अनुभव छ । उनले गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष बनेर जनप्रतिनिधिको भूमिकासमेत निर्वाह हुन् । आचार्य पाल्पा क्षेत्र नं १ को पुरानो कम्युनिष्ट गढ रिङ्नेरह निवासी हुन् ।
पाल्पामा चाडपर्व सुरक्षा योजना लागू
रामपुरले कृषि पर्यटनलाई अघि बढाउने
पत्रकार महासंघको संशोधित विधान पाल्पाबाट जारी
नवौँ पुस्तकालय दिवस मनाइयो